पुरानालाई टक्कर दिन २०१९ मा यी ४ नयाँ नायिका बलिउडमा डेब्यु गर्दै ! (तस्बिरसहित) «
पुरानालाई टक्कर दिन २०१९ मा यी ४ नयाँ नायिका बलिउडमा डेब्यु गर्दै ! (तस्बिरसहित)
एजेन्सी, १९ पुस । २०१९ को शुरुवात भएसँगै बिगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नयाँ-नयाँ कलाकारहरु बलिउडमा डेब्यु गर्ने भएका छन् । स्टारहरुका सन्तानहरुले गर्ने डेब्युले मिडियाहरुको ध्यान जहिले पनि तान्ने गरेको छ । सन् २०१९ मा क-कसले बलिउडमा डेब्यु गर्दैछन् । आउनुहोस् त्यसबारे जानकारी लिउँ ।
चंकी पाण्डेकी छोरी अनन्या ‘स्टूडेन्ट फ द ईयर २’ बाट बलिउडमा डेब्यु गर्दैछिन् । यस चलचित्रमा टाइगर श्रफ पनि देखा पर्दैछन् ।
९० को दशककी चर्चित बालिका कलाकार तारा सुतारिया पनि यहि वर्ष बलिउडमा डेब्यु गर्ने सम्भावना रहेको छ। उनी पनि ‘स्टूडेन्ट फ द ईयर २’ बाट बलिउडमा डेब्यु गर्ने भारतीय मिडियाले बताएको छ ।
कटरीना कैफकी कान्छी बहिनीको रुपमा चर्चित रहेकी इसाबेल पनि यहि वर्ष डेब्यु गर्ने प्रवल सम्भावना छ । भारतीय मिडियाहरुका अनुसार इसाबेल स्टेनली डी कोस्ट’ द्वारा निर्देशित फिल्म टाइम टू डान्सबाट डेब्यु गर्दैछिन् ।
मोहनीश बहलकी छोरी प्रनूतन बहल अर्का स्टार किड जहीर इकबालसँगै बलिउडमा डेब्यु गर्दैछिन् । प्रनूतन चलचित्र नोटबुकबाट डेब्यु गर्दछिन् । यस चलचित्र मार्फत सलमान खानले जहीर इकबाल र प्रनूतन बहललाई एक साथ लन्च गर्दैछन् ।